China Polyester Spandex fidsan shaadhka wax soo saarka iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huasheng
Qiyaasta tolida wanaagsan.JilicsanLaba jid kala bixi.
Dharka tolan ee polyester spandex fidsan ee shaadhka, maqaalkeena nambarka FTT-WB105, waxaa lagu dhejiyay 85% polyester iyo 15% spandex.
Marxadu waxay leedahay fidsan laba-gees oo toosan waxayna leedahay fidsan farsamo oo yar.Kani waa maro funaanad ah oo fidsan oo la neefsan karo oo dhammaystiran.Waxay leedahay dareen raaxo leh iyo daahyo qulqulaya oo wanaagsan taasoo ay ugu wacan tahay maro funaanad.Dharka shaadhka ah ee caadiga ah ayaa leh hal muuqaal oo wejiga ah iyo mid kale oo gadaal ka ah.
Dharka shaadhka ah ee polyester spandex waxa uu ku fiican yahay lebbiska, dharka ciyaaraha, funaanadda ciyaaraha, dharka jimicsiga, lugaha, iyo rajabeetada ciyaaraha.
Si loo buuxiyo heerarka tayada adag ee macaamiisha, kuwan dharka funaanadaha fidsan waxaa soo saaray mashiinadayada tolida wareegyada horumarsan.Mashiinka tolida ee xaalad wanaagsan ayaa hubin doona tolida wanaagsan, fidsan wanaagsan iyo muuqaal cad.Shaqaalaheenna khibradda leh ayaa si wanaagsan u daryeeli doona dharkan funaanadaha min greige ilaa mid dhammeeyey.Wax soo saarka dhammaan dharka funaanadaha fidsan waxay raaci doonaan habab adag si loo qanciyo macaamiisheena ixtiraamka leh.
Hore: Polyester spandex dhumuc weyn oo dhexda ka samaysan
Xiga: Polyester hal funaanad
Dharka Yoga Wear
Soft polyester nylon spandex 4 way iskala hees...
87 Polyamide iyo 13 elastane fidsan yoga fabri ...
Naqshad cusub oo xariijimo cationic stretch funaanad fabri...
Shaadh qudha oo la cadayday oo ka samaysan fidsan oo leh...
100% Polyester hal funaanad toddon dhar ah oo loogu talagalay sp ...